The Rohingya News Bank : ဘင်္ဂလားဒေရှ်
Showing posts with label ဘင်္ဂလားဒေရှ်. Show all posts
ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြန်တွေဆီက အစပြုသ လား
ရန်ကုန်မြို့က ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာများအား စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းများကို ပို့ဆောင်ပေးနေကြသော PPE ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံပြည့် ဝတ်ဆင်ထားသည့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဒုတိယလှိုင်းဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကနေ ပြန်လာတဲ့ နေရပ်ပြန်လာသူတွေဆီကနေ အစပြုတာ ဖြစ်နိုင်ခြေများကြောင်း ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာခင်ခင် ကြီး က RFA ကိုပြောပါတယ်။
Labels: 2020, Covid-19, mm, စစ်တွေ, ဒုတိယလှိုင်း, မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာစခန်းတွင်း ရေဘေးအရေးပေါ်ကာကွယ်မှု ဆောင်ရွက်နေ
၂၀၁၈ ခုနှစ်တုန်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကုတုပလောင်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာ တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်း။ (ဇူလိုင် ၀၄၊ ၂၀၁၈)
မုတ်သုန်ရာသီချိန် မိုးများရေကြီးပြီး လူသန်းချီ ရေဘေးသင့်နေရတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံထဲက ရိုဟင်ဂျာ camp တွေထဲ ရေဘေးအန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်နေတဲ့အခြေအနေကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်း ထောက် မဆုမွန်က တင်ပြပေးပါမယ်။
Labels: 2020, mm, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်, သတင်း, ရေးဘေး
လှေစီးပြေး ရိုဟင်ဂျာတွေ ပြန်လက်ခံရေး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို မလေးရှားတောင်းဆိုမည်
မလေးရှားနိုင်ငံကို ၀င်ဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ လှေစီးပြေး ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တချို့။ (မေ ၀၂၊ ၂၀၂၀)
မလေးရှား ရေပိုင်နက်အတွင်း စက်လှေတစ်စင်းနဲ့ ဝင်ရောက်လာရာက ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၃၀၀ လောက်ကို ပြန်လက်ခံဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကို တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ မလေးရှား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Ismail Sabri Yaakob က အင်္ဂါနေ့က ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, mm, ဗွီအိုအေ, ပြန်လက်ခံရန်, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, မလေးရှား, သတင်း, လှေစီးဒုက္ခသည်
နယ်စပ်က တရားမ၀င် ၀င်လာသူတွေကြောင့် ကပ်ရောဂါ ကူးစက်မှာ ရခိုင်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Cox's Bazar ခရိုင်အတွင်းက ဒုက္ခသည်စခန်းတခုမှာ တွေ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တချို့။ (ဧပြီ ၀၈၊ ၂၀၁၉)
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေဆဲကာလမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်စခန်းကနေ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင် တောမြို့နယ်ဘက်ကို တရားမ၀င် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်လာတဲ့သူတွေကြောင့် ဒေသခံတွေ စိုးရိမ် နေရတဲ့ အခြေအနေအကြောင်းကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် ကိုနိုင်ကွန်းအိန်က တင်ဆက်ပေးပါ မယ်။
Labels: 2020, Covid-19, Cox's Bazar, mm, စိုးရိမ်, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, ရခိုင်, သတင်း
COVID-19 ကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခ သည်တစ်ဦးသေဆုံး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ Cox's Bazar က ကုတုပလောင် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းမှာ သတိပေးချက်တွေ ကြေငြာနေတဲ့ မြင်ကွင်း။ (မေ၊ ၁၅၊ ၂၀၂၀)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တစ်ဦး သေဆုံး သွားကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
သေဆုံးသူဟာ ကော့ဇ်ဘဇားခရိုင်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းမှာ နေထိုင်သူ အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ်အမျိုးသား ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးချက်တွေအရ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသူ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ကော်မရှင်နာမင်းကြီး Abu Toha M.R. Bhuiyan က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, ARSA, Covid-19, Louise Donovan, mm, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်, သတင်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကိုဗစ်အ တည်ပြုလူနာ ၂၉ ဦးရှိ
ဗွီအိုအေ ( မြန်မာဌာန )
26 မေ၊ 2020
ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံက ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေ အတွင်းမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ အတည် ပြု လူနာ ၂၉ ဦးထိ ရှိနေပြီး ဒုက္ခသည် ၁၅,၀၀၀ လောက်ကို သီးခြားခွဲခြား စောင့်ကြည့် နေကြောင်း အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေက တနလာင်္နေ့မှာ ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, Covid-19, mm, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်း, သတင်း, အတည်ပြုလူနာ
Amphan မုန်တိုင်းကြီး အိန္ဒိယနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကြား ကုန်း တွင်းပိုင်း စတင်ဝင်ရောက်
20 မေ၊ 2020
အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း Orissa ပြည်နယ် Bhadrak မှာ Amphan ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းမတိုက်ခတ်စဉ် မိုးစတင်ရွာသွန်းနေတဲ့ မြင်ကွင်း (မေ ၂၀၊ ၂၀၂၀)
Amphan ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာ ဒီနေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲလာက်မှာ ကုန်းတွင်းပိုင်းကို စတင်ဝင်ရောက်နေပြီး မုန်တိုင်းဗဟိုကုန်းတွင်းပိုင်းကို ဖြတ်သန်းတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အလွန့်အလွန်အားကောင်းတဲ့ မုန်တိုင်းကနေ အားလျော့ကျသွားဖွယ်ရှိပေမဲ့ ကုန်းတွင်းပိုင်း မုန်တိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်တဲ့ သတင်းကို ဗွီအို အေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြပေးပါမယ်။
Labels: 2020, Amphan, mm, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, မုန်တိုင်းကြီး, ဝင်ရောက်, သတင်း, အိန္ဒိယ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ မီးလောင်မှု ထပ်မံဖြစ်ပွား
ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်း မီးလောင်ပြီးနောက် ကြည့်ရှုနေသည့် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ။ (မေ ၁၇၊ ၂၀၂၀။ ဓာတ်ပုံ - U Isalm (U Aye Lwin) Rohingya Refugees)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ဒီကနေ့ နောက်ထပ် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အ ပြည့် အစုံကို မဆုမွန်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
သိန်းနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ ခိုလှုံနေထိုင်ကြတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဇ်ဘဇားခရိုင်က ကုတုပ လောင် ဒုက္ခသည်စခန်း အမှတ် ၅ မှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက မီးလောင်မှု ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ မီးလောင်မှု အတွင်း ထိခိုက်သေဆုံးသူ မရှိပေမယ့် နေအိမ်အများအပြား မီးဘေးသင့်ခဲ့တယ်လို့လည်း ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ရ တဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ဦးအီစလံက ပြောပြပါတယ်။
Labels: 2020, mm, ဗွီအိုအေ, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, မီးလောင်မှု, ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်း, သတင်း
မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဒုက္ခသည်တွေအတွက် အီးယူ ယူရို ၃၁ သန်းလှူ
ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရေး အတွက် လူသားချင်း စာနာမှု အထောက်အပံ့ အဖြစ် ဥရောပ ကော်မရှင်က ယူရို ၃၁ သန်း ပေးအပ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ပြသနာဟာ ၃ နှစ်အတွင်းကို ရောက်လာပြီး ရှင်သန် ရပ်တည်ရေး အတွက် လူသားချင်း စာနာမှု အထောက် အပံ့တွေ အပေါ် မှီခိုနေရဆဲ ဖြစ်သူတွေ အပေါ် ဆက်လက် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ပိုပြီး အရေးကြီး လာတယ်လို့လည်း ပဋိပက္ခ စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Janez Lenarčič က ကြေညာချက်မှာ ပြောဆို ထားပါတယ်။မြန်မာ အစိုးရဘက်ကတော့ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို လက်မခံပါဘူး။
Labels: 2020, EU, mm, မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, ယူရို, လှူဒါန်း, သတင်း
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကန့်ကွက်လို့ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံ များ အဖွဲ့မှာ မြန်မာပါခွင့်မရ
November 8' 2019
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့ (IORA) ၂၁ ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေး။
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေနိုင်ငံများအဖွဲ့ (IORA) မှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကလျှောက်ထား တာ ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဖွဲ့က ငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။
အခုနိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့နဲ့ ၆ ရက်နေ့တွေမှာ ယူအေအီးနိုင်ငံ အဘူဒါဘီမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ၂၁ ကြိမ် မြောက် (IORA) အဖွဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ထပ် ပြီးလျှောက်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Labels: 2019, IORA, mm, ကန့်ကွက်, မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, သတင်း
ရိုဟင်ဂျာအရေး သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ အချက်သုံးချက် သဘောတူ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အဗ္ဗဒူလ်မိုမင်၊ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိ၊ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် ခရစ္စတင်း ရှရနာဘာဂနာတို့အား ၂ဝ၁၉ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ နယူးယောက်မြို့ ဆွေးနွေးပွဲတွင် တွေ့ရစဉ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်ဒုက္ခသည်တွေ အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူး ယောက်မြို့ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံပြင်ပမှာ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ယိဦးဆောင်ပြီး မြန်မာ နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အဆင့်မြင့်အရာရှိ်တွေ မနေ့က အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာ သဘောတူညီချက် သုံးချက် ရရှိခဲ့တယ်လို့ တရုတ်အစိုးရသတင်းဌာန ဆင်ဟွာက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, တရုတ်-မြန်မာ, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, ရိုဟင်ဂျာအရေး, သတင်း, သုံးပွင့်ဆိုင်, သဘောတူ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ စေလွှတ် မည်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကုတုပလောင် ဒုက္ခသည်စခန်းက မွတ်စလင် ရိုဟင်ဂျာ မိသားစုကို တွေ့ရစဉ် Photo: AFP
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့ မြန်မာအစိုးရက အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တဖွဲ့ စေလွှတ်မယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဟောက်ဒို ဆွမ်း က ပြောပါတယ်။
RFA ဝိုင်းတော်သား ဦးသစ်ဆင်း စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, mm, RFA Burmese, မြန်မာကိုယ်စားလှယ်, ဘင်္ဂလားဒေရှ်, သတင်း